Turkiga oo daboolka ka qaaday lacag KAASH ah oo uu bil kasta siiyo DF Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo daboolka ka qaaday lacag KAASH ah oo uu bil kasta...
Turkiga oo daboolka ka qaaday lacag KAASH ah oo uu bil kasta siiyo DF Somalia
(Muqdisho) 20 Abriil 2020 – Dalka Turkiga oo aad u taageera soo kabashada dowladnimada Somalia ayaa daboolka ka rogey inuu bil kasta lacag kab miisaaniyadeed ah siiyo dalka Somalia iyo inta ay la egtahay.
Warkan ayaa waxaa dadwaynaha la wadaagey Danjiraha Turkiga u fadhiya Somalia, kaasoo ay dhowaan waraysatay VOA Soomaali, kaasoo waxyaabo badan bayaaniyey.
Turkiga ayaa sheegay inuu bishiiba Somalia ku beelo lacag dhan $2.5milyan oo doollar, taasoo lagu kabo miisaaniyadda qaranka Somalia.
Lacagtan ayaa marka sanadkii lagu dhufto waxay noqonaysaa ilaa $30milyan oo doollar, taasoo wax badan u qabata DF Somalia.
Turkiga oo olog dhow la ah Somalia ayaa sidoo kale ka caawiya dhismaha kaabayaasha, tababarka ciidamada iyo howlwadeennada maamul iwm.
Waxaa sidoo kale jira heshiisyo istaraatiji ah oo u dhexeeysa Somalia oo Turkiga, kuwaasoo taabanaya dhinacyada amaanka, dhaqaalaha, ganacsiga, dhaqanka iwm, waloow ay u baahan yihiin in lasii hormariyo oo la cayimo.
Previous articleBooliiska Nairobi oo shabaqle ku ururiyey 39 haween Soomaaliyeed ah (Arrin ay isku dayeen?)
Next articleNINBA MARKII: Turkiga oo si lama filaan ah uga aarsaday Sucuudiga & Imaaraadka